Ihe dị ọcha nna ukwu?
Ọcha nna ukwu deletes enweghị isi ihe, rifọrọ erifọ, junk faịlụ, ọcha caches, ọcha ndekọ na clogs, na-emechi enweghị isi ngwa. Ọ na-enyocha kwa Android ngwaọrụ maka malware na gbapụrụ ọsọ-elu ngwaọrụ. Ọcha Nna-ukwu mgbochi nje engine ana achi achi gburugburu elekere nchebe maka ngwaọrụ gị. Nke a ngwa si Kingsoft nwere ihe karịrị nde mmadụ 40 ọrụ gburugburu ụwa.
Ọ bụla Android ngwa ga-emepụta ụfọdụ ego nke mmapụta faịlụ, junk faịlụ, caches. Ndị a faịlụ bụghị nanị ogide ohere na gị smartphone, ma ha na-igbapu ekwentị batrị ngwa ngwa. Ọcha nna ukwu deletes ndị a faịlụ na-eme ka ohere na ekwentị gị. Ekele ya ndabere ihicha atụmatụ, ị nwere ike na-adịghị ọbụna aghọta na Cleaner na-arụ ọrụ na ndabere.
O doro anya na Clean nna ukwu bụ onye nke kasị mma ngwọta na-adị na-elu-gị Android. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ nnukwu software omume dị na ahịa. Ebe a na-iri n'ime ha.
10 uzo ozo ka Hichaa nna ukwu
Ọ dịghị 1. Wondershare MobileGo for Android
Wondershare MobileGo pụrụ ịbụ Clean nna ukwu ji mma ọzọ. Abụọ-akụkụ usoro mejupụtara Android na ngwa na ngwa n'ihi na windows PC.
The Android ngwa deletes enweghị isi faịlụ, na-emechi enweghị isi ngwa site na ekwentị gị ike ụfọdụ ohere na ọsọ-elu na ekwentị gị. Wondershare MobileGo na-enyere na-enyefe faịlụ site na PC gị gị smart ekwentị na dị nnọọ nkeji ole na ole. Ya-enye gị jikwaa gị na ekwentị data eji gị PC. The software emepụta azụ-elu maka ekwentị gị data n'ime akụkụ dị nta nke sekọnd.
Ọ dịghị 2. TrustGo
TrustGo bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na ngwa na-achọpụta rụọ na deletes ngwa, spyware, na malware na-eme ka nche mbipụta. Ọ na-awade nnukwu interface nke nwere ike inyere gị nyochaa ị ekwentị data ojiji, ebe nchekwa ojiji, oriri batrị, wdg TrustGo si mgbochi nje engine awade gburugburu elekere nchebe ngwaọrụ.
The ngwa nwere ike ibudata free nke na-eri, na e nweghị nsogbu uru-ekwu okwu banyere nke a ngwa.
Ọ dịghị 3. Advanced Task egbu egbu maka Android
Mepụtara site na ngwa onye ReChild, Advanced Task egbu egbu maka Android ọcha ekwentị ebe nchekwa site ihichapụ enweghị isi faịlụ, na ihichapụ enweghị isi ngwa.
Ngwa si ụzọ ịrụ ọrụ dị nnọọ mfe; ọ deletes enweghị isi ngwa ọdịnala na faịlụ. Ma ngwa nwere ike ọ gaghị abụ bara uru n'ihi na ngwaọrụ na-arụ ọrụ na gam Gingerbread na n'elu, dị ka ndị a na nsụgharị nke Android enye nhọrọ nyochaa ngwa ọdịnala na iji ngwa faili. Ya mere, ma eleghị anya ndị a ngwaọrụ adịghị mkpa ọzọ ọrụ njikwa na egbu egbu.
Ọ dịghị 4. App Cache Cleaner
Ọ bụrụ na ileghara anya, cache nwere ike ogide bukwanu akụkụ nke ekwentị gị na ebe nchekwa. Nhicha cache nwere ike bụrụ onye na-ụzọ kasị mma ike ọzọ ohere na gị smartphone, na bụ ihe App Cache Cleaner maka Android eme maka gị.
Mepụtara site na ngwa onye a na-akpọ Infolife, a ngwa-enyocha kwa ngwaọrụ gị na ike igosi kpọmkwem ego nke uwa nwere site cache. All na ị chọrọ ime bụ pịa "dị ọcha" ka tufuo niile cache.
Nanị ọjọọ akụkụ na a na ngwa yiri ka na-anọghị nke akpaaka cache nhichapụ atụmatụ. App Cache Cleaner egosi alerts mgbe cache esịmde ruo ụfọdụ ịgba, ma ọ dịghị nhọrọ ka akpaaka ihichapụ.
Ọ dịghị 5. Adguard maka Android
Dị ka aha na-atụ aro, ngwa elekwasị anya ọzọ na ịlụ Bibie nke na-achọghị mgbasa ozi, onyunyo, na ojiji weebụsaịtị. Ngwa ejisie iji belata loading oge maka saịtị, na gbapụrụ ọsọ-elu ekwentị dị ka mma.
N'ụzọ dị mwute, na-eji ngwa bụ adịghị na Google Play ma na-arụnyere dị ka ọzọ ngwa.
Plus, ngwa bụ dakọtara na handsets na-arụ ọrụ na 4.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị nke Google si software.
Ọ dịghị 6. Mobogenie
Ụfọdụ ozi ederede ndị dị mkpa, ma ha na-akwụsị-elu bi a otutu ohere gị smartphone. Mobogenie bụ ngwa na pụrụ inyere gị aka jikwaa gị ederede ozi, na ike azụ-elu maka ha na gị na PC. The ngwa na-enyere na ijikwa kọntaktị na ngwaọrụ gị.
Ngwa na-kere Beijing Gamease Age Digital Tech. Ijikwa ozi ederede pụrụ inyere gị aka ime ka ụfọdụ mmezi ohere na ekwentị gị, ma nke a ngwa bụ maa bụghị dị ka bara uru dị ka ndị na-eme ka ohere site ihichapụ cache ma ọ bụ ijikwa ọzọ ngwa.
Ọ dịghị 7. du Speed ​​Booster Cache Cleaner
Nke a software bụ ikekwe abụọ kasị mma osompi ka Hichaa nna ukwu mgbe Wondershare MobileGo.
Du Speed ​​Booster Cache Cleaner ọcha junk na cache faịlụ site na gị smart ekwentị. Mmepe nke a software na-ekwu na a na ngwa nwere ike dịkwuo gị na ekwentị ọsọ site ruo 60 percent. Ọ ejisie ngwa na Njikwa akpaaka mmalite ngwa. Du Speed ​​Booster Cache Cleaner na-onwem na-emegide nje na Trojan scanners. A na ngwa nwere ihe ọ bụla ịkatọ, na ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ.
Ọ dịghị 8. ​​Teebik égwu Mobile Security & Anti Virus maka Android
Teebik égwu Mobile Nche na Anti Virus software awade nchebe site Trojan, spyware, malware na nje virus. Nke a software na-akpaghị aka na-enyocha niile ngwa mgbe ụfọdụ oge, na-eme ị na-emelite banyere ngwaọrụ si nche. Ọ na-eme ka ị na-bụrụ na ọ bụrụ na ị wụnye malware ma ọ bụ spyware. Ị nwere ike na-esochi banyere ngwa na ogide a otutu ohere ma hichapụ ndị na-enweghị isi n'anya.
Ekwentị gị pụrụ ọsọ-elu ruru ka a software, ma dị mwute ikwu, o nwere ike adịghị jikwaa na-elekọta cache na ndị ọzọ na junk faịlụ kere ngwa.
Ọ dịghị 9. Booster maka Android
Ikekwe, i nwere ike anụtụbeghị banyere NQ Mobile Security si Booster maka Android. Ma, ngwa awụnyere ihe karịrị nde mmadụ 50 ọrụ. Ọ bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ.
The software ngwa ngwa-enyocha kwa ekwentị gị / mbadamba PC na-egosi na pasent nke ngwaọrụ ebe nchekwa na-na-arụ, tinyere aro banyere enweghị isi faịlụ, aga-eme. All na ị chọrọ ime bụ pịa Nhichapụ. Booster maka Android bụ ihe kasị mma nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ free ngwa na-elekọta ebe nchekwa ekwentị gị. Nanị ọjọọ akụkụ banyere nke a ngwa bụ ya ịhụnanya na ịkpọasị mmekọrita na ụfọdụ ngwa na-anọgide na-arụ ọrụ na ndabere.
Nke 10. AirDroid
AirDroid maka Android awade mma achịkwa smart ekwentị ngwa, na-enye gị ohere jikwaa gị na ekwentị ọdịnaya site nchọgharị na weebụ. Nyefee faịlụ, foto, na vidiyo na-aghọ nnọọ mfe ruru ka a ngwa. The software na-enyekwa ezigbo oge ọmụma banyere agba ọsọ ngwa, Filiks, na mgbasa ozi faịlụ na-echekwara na ebe nchekwa ekwentị gị nakwa dị ka SD kaadị.
The ngwa yiri ka ndị ọzọ uche n'ihe na-enye data transfer na faịlụ management. Ọ bụrụ na ị na-achọ na ngwa na-pụrụ inyere gị aka tufuo nke na-achọghị faịlụ, AirDroid nwere ike ịbụ mma nhọrọ.
> Resource> Clean-elu> 10 Alternatives ọcha nna ukwu maka Android